आमा तिमी छौ र भगवान छन् ! « Media for all across the globe
सुशान्तको परिवारलाई न्याय दिलाउन बाबा रामदेवले गरे यज्ञ
आमाको माया नै शक्ति को स्रोत हो।
मनभरी पीडा आँखा भरी आसु
भएपनि आफ्नो सन्तानको लागि
मुस्कुराउने देवि भनेकै आमा हुन ।
आमा चाहे पढेको होस या अनपढ होस तर संसारको बहुमुल्य ज्ञान र प्रेरणा आमा बाटै प्राप्त हुने गर्दछ ।
यस सुन्दर संसारमा हामीलाई ल्याउने काम हाम्रो आमाले गर्नुहुन्छ। आमाले हामीलाई जन्माई हुर्काउनुहुन्छ। आमाले हामीलाई हिँड्न र बोल्न पनि सिकाउनुहुन्छ। भगवान् विश्वका हरेक घरमा जान नपाएर उहाँले हरेक घरमा आमालाई पठाउनुभयो। आफ्नो शीतल छायामा आमा हामीलाई ज्ञानगुणका कुराहरु सिकाई हामीलाई योग्य र सफल व्यक्ति बनाईदिनुहुन्छ ।
आमा आफ्नो अमूल्य समय र सम्पूर्ण कामहरु त्यागेर हाम्रो हितको बारेमा सोच्नुहुन्छ। आफू खाना नखाएपनि आमा हामीलाई खाना जसरी पनि खुवाउनुहुन्छ। आमाको त्याग निकै महान् हुन्छ। दुःखकष्ट वा कुनै समस्या पर्दा आमा हाम्रो हौसला बढाई हामीलाई त्यस समस्याबाट निस्कन प्रेरणा दिनुहुन्छ। हाम्रो नेत्रमा आँसु देखे आमाको चित्त दुःख्छ भने हाम्रो मुखमा मुस्कान देख्दा आमा खुसी हुनुहुन्छ। हाम्रो खुसीमा नै आमाको खुसी रहेको हुन्छ।
हामीलाई ज्वरो वा कुनै रोग लाग्दा आमा नै हाम्रो हेरचाह गर्नुहुन्छ । हामी सन्तानको लागि आमा हाम्रो छाता जस्तै हुनुहुन्छ । जसरी छाताले हामीलाई घाम र पानीबाट जोगाउँछ,आमाले पनि हामीलाई दुरघट्नाहरुबाट जोगाउनुहुन्छ । जीवनमा आमा हाम्रो मार्गदर्शक बनी हामीलाई सही मार्गमा हिँडी असल कर्म गर्न प्रेरणा दिनुहुन्छ ।
हामी सन्तानहरुले आमाको महत्त्व बुझ्नुपर्छ र आमाको भावनाको कदर गरी आमाको सम्मान गर्नुपर्छ। सफा मनले हामीले आमाको सेवा गर्नुपर्छ। आमा भनेकै भगवान् हुनुहुन्छ र मार्गदर्शक बनी हाम्रो सुख र दुःखमा आमा नै हाम्रो सात दिनुहुन्छ आमाको महिमा साच्चिकै अपरम्पार छ|
मन्दिरमा भगवान कहाँ भेटिएला ?
साच्चै मूर्ति पुज्ने म मूर्ख हुँ
आमा तिम्रो दीर्घायुको
कामना गरिरहन्छु दिनहुँ
तिमी छौ र त आमा
हरेक पीडाको मलम छ
मेरो भगवान मेरै आमा
तिमीलाई सलाम छ ।
आमा तिमी छौ र भगवान छन्
तिमी छौ र घर छ तिमी छौ र आधार छ
तिमी छौ र हिम्मत छ तिमी छौ र संसारै मेरो छ
तिमी छैनौ त सबै अँधेरो छ
रोगमाथि पनि मलम छ
मेरी आमा तिमीलाई तिम्रै छोराको
साँच्चिकै सलाम छ |
(कक्षा 10) श्री गुरुकूल माध्यामिक विधालय, ढकारी गाउँपालिका अछाम
फेसन गर्न थाले गुन्निऊ चोली बिर्सिय !
देख्छु मैले (प्रितम पाण्डे)
भित्र-भित्रै छिमेक तिर सल्किन्छ राष्ट्रवाद !
केही त मान राख ती पुर्खाहरुको निम्ती (गजल)